Lebedev leonid Leonidovich wazalwa ngo umkhaya ovamile eMoscow ngo-May 2, 1956. Leonid is njengendlela producer, usomabhizinisi enkulu, sezombusazwe kanye Billionaire ezaziwayo. Kanti futhi uphinde abe yilungu party "United Russia".
Lebedev leonid Leonidovich: Biography
Leonid ubekade evamile esikoleni eMoscow, bese wabhalisa e MIHM, okwamanje kulesi sikhungo yazuza isimo enyuvesi. Lapho, ngo-1979 futhi baqeqeshelwa ongunjiniyela, yilokhu nendima ngokukhetha isiqondiso womsebenzi ebhizinisi.
Ngemva kokuphothula wasebenza iminyaka engaba ngu-8 ubudala ngezinga e Izigayo ezihlukahlukene "Mosconcert". "Synthesis International" Inkampani wakhonza njengephayona CEO kusukela 1988. Le nkampani ilunga iphrojekthi Soviet-American. Leonid wathatha ingxenye enkulu ekudalweni lokhu ibhizinisi. Inkampani wahlanganyela ukuthekelisa kwemikhiqizo wamakhemikhali nezibulala-petroleum, kanye izinhlobo ezahlukene imishini izinkampani ezimbonini.
Ukudala empilweni Leonidas
Ngo-1984, Lebedev leonid Leonidovich banquma ukuzama yena indima umqondisi eqenjini zomculo "Autograph". Phakathi nalesi sikhathi waba nesithakazelo umculo ngokwanele sina, futhi kamuva usethe studio yakhe siqu, okuyinto kwaba osesikhundleni "Synthesis Records". Kuyaphawuleka ukuthi studio imzuzele eziningi udumo, eqoshiwe yakhe yobuciko zabo, abadlali abaningi Russian.
Ngo-2005, kanye abadumile ifilimu umqondisi Valeri Todorovski futhi umkhiqizi Vadim Goryainov wavula eyaziwa zaphetha inkampani "Red Umcibisholo", okuyinto kwakuhambisana nezinga imisebenzi yokukhiqiza. Manje, lokhu inkampani ifilimu ethandwa kakhulu, kube odlale indima ebalulekile ukudalwa amafilimu ukuthi bethatheka ababukeli. Ngenxa 'Red Umcibisholo "yavela amafilimu ezifana" isazi sokuma komhlaba esiphambili Drank Globe yakhe Away, "" Dudes "kanye nabanye abaningi. Abaqondisi nabakhiqizi le nkampani uthande emkhakheni wabo, ngakho-ke, indlela wemfanelo umsebenzi wabo futhi unike ngokuphelele ngokwabo kuye.
Leonid Leonidovich njalo isimo sengqondo esihle art kanye nekhono lokusungula, ngakho ubizwa zimatasa zisiza amaphrojekthi ahlukahlukene kwamasiko wonke emkhakheni wezobuciko.
Lebedev leonid Leonidovich: Umsebenzi
Efundelwe leonid Leonidovich egcwele kakhulu, waqala emikhakheni eminingi futhi izikhundla. uhlu Small wakhuliswa kulolu hlu. Yena waqala career zokudala nezombusazwe.
Ngo-1993 waba umsunguli we-LLP "Ubisi phezu kwaleli chibi."
Leonid Leonidovich ngo-2006 wajoyina iqembu "United Russia", ingxenye okuhlalayo namuhla.
Lebedev leonid Leonidovich waklonyeliswa Order of Honour.
Kusukela ngo-2002 wayengumuntu omele ku Federation oPhethe eRepublic.
Ngo-2005, kwaba yingxenye Commission wesikhashana, okuyinto kuye kwahlotshaniswa ukuhlaziywa ukuphoqelelwa imikhuba kumthetho we Russian Federation.
Ngo-2003, wathatha isinyathelo, okwathi ngemva kwalokho Isikhwama yasungulwa, okuhloswe ngaso ukusekela izinhlelo kwamasiko nezenhlalo Chuvashia.
Ekuqaleni kuka-2015 wasitshiya ehhovisi lakhe Federation Council.
Ngo-2011 wathola i the Order of Lobu-Orthodox LaseRussia.
Leonid masishane babefuna yonke imigomo yabo, abazisebenzako bese usetha ngokwami imigomo emisha zonke. Waziwa hhayi kuphela e-Russia kodwa futhi kwamanye amazwe amaningi emhlabeni wonke. Kungenzeka kudlale indima enkulu empilweni yami ukuthi Lebedev leonid Leonidovich, umndeni wakhe, umkakhe namadodakazi akhe amabili, enobunye ngempela futhi asekelwa njalo nomunye zonke emitameni. Leonid hhayi kuphela wazithola ezombusazwe nomnotho, kodwa futhi bona ngokwabo e zokudala bewathanda umculo wadala inkampani ifilimu ehloniphekile.
Izindawo ezithakazelisayo eziningi e Voronezh: izikhangibavakashi, incazelo kanye nomlando
Marina Levtova: Biography, ukuphila siqu, imbangela yokufa isithombe
Dzhon Rolf futhi Pocahontas: Biography, amaqiniso athakazelisayo zokuphila. Ubani owadala isithombe best of ipulazi ugwayi esikrinini?
Sergey Babenko wafuna ukusebenzisa imali Zhanny Badoevoy, kodwa wabona ngokusebenzisa uhlelo ngobuqili!
Dueyn Dzhonson (The Rock): Filmography, biography, ukuphila siqu futhi ezithakazelisayo amaqiniso
Shetner Uilyam: Biography, amaqiniso ezithakazelisayo, izithombe
I juice zalesi sihlahla kusiza bite omiyane? Umiyane amafutha eluma ingane?
Stomatitis ezinganeni: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Hero Russia Kadyrov Ahmat Abdulhamidovich: Biography
Enamel ase 9006: izinzuzo, izici isicelo
Semfundo umdobi: Cook - kuyini?
Lapho amaJapane kwesheri? Isikhathi zezimbali sakura, isithombe
Indlela engcono kakhulu ukuqhubeka, uma ukudla kwakusihlwa ku inyama yenkonyana? Ubhake kuhovini!
Amazwi Latin: izibonelo. Popular izinkulumo Latin
Luthini olwakho "ugqozi '? amathiphu Simple sendlela sifinyelele lo mgomo
HACCP embonini yokudla - kuyini futhi kuyadingeka? Izimfuneko ze-HACCP kumabhizinisi okudla. Ukwethulwa kwezimiso ze-HACCP embonini yokudla
Dzerzhinsk, Belarus: umlando kanye nezinto